2008 August (title page) | Save Burma
5th Day – Protest in Thailand
Thai protest siege moves into fourth day
Anwar, back in Malaysia parliament, stages walkout
Thai’s Anti-government Protest – Third Day
Anti-government protests intensify in Thailand
Gambari proves he’s wasting his time during Burma’s visit and Junta’s insult to Aung San Suu Kyi in front of her house ( Regime’s MRTV3 Video )
What is Real Gambari?
စက်တင်ဘာလကို ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ နအဖ (အထူးသတင်း)
World focus on Burma (24 August 2008)
ဂမ်ဘာရီ ခရီးစဉ်သည် မထိရောက်နိုင်ကြောင်း အန်အယ်ဒီ ဝေဖန်
Burma/Myanmar: Teen ‘Raped And Killed By Soldiers’
Petition for UN Special Envoy Mr. Gambari
အဓမ္မပြုကျင့်မှုများ – တိရိစ္ဆာန်များအား ညှင်းပမ်းနှိပ်စက် ခိုင်းစေ သတ်ဖြတ်ခြင်း
ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး ရုပ်သံမှတ်တမ်းအတွက် Emmy ဆု ပဏာမ ရွေးချယ်
ပရဟိတ ဦးဆောင်လမ်းပြ ရုပ်ရှင်မင်းသား ကျော်သူနှင့် အဖွဲ့ (မဇ္ဈိမ အင်တာဗျူး)
မြန်မာ Chatter များအတွက် အထူးသတိပေးချက်
Htoo Trading, U Gambira, Su Su Nway and Hanny Oo
World focus on Burma (13 August 2008)
World focus on Burma (10 August 2008)
Local dissidents mark the 20th anniversary of “8-8-88″ bloody uprising
ပြည်သူသာ အမိ ပြည်သူသာ အဖ
World focus on Burma (5 August 2008)
Cyclone Nargis – three months on; Myanmar asking farmers to repay cyclone aid (more articles added to)
New UN rights envoy starts mission in Myanmar
World focus on Burma (3-8-2008)
နာဂစ် (၃)လပြည့်နေ့မှာ ကိုဇာဂနာ၊ ကိုဇော်သက်ထွေးတို့ အဖမ်းခံနေရဆဲ
Public order charge brought against blogger and journalist + ဇာဂနာရဲ့ အတ္ထုပ္ပတိ + ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားကြီး လူရွှင်တော် ဇာဂနာ
World focus on Burma (2 August 2008)
ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ် ပြောပြတဲ့ ခရစ်စ်တီးကျွန်း လူသတ်မှု
World focus on Burma (1 August 2008)
ညီလေး… ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရ မင်း အဘိဓါန်ထဲက ဆုတ်ဖြဲပစ်လိုက်။ ဆုံးရှုံးတယ်လို့ ထင်နေတာတွေဟာ တကယ်တော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာ၊ ပေးဆပ်နေတာ။
ငါတို့ကလေးတွေအတွက်၊ ငါတို့ သားမြေးတွေအတွက် တို့ဘိုးဘွားတွေသာ မပေးဆပ်ခဲ့ရင် ဒီနေ့ လွတ်လပ်ရေး ဘယ်ရလိမ့်မလဲ။
အဲဒီ ပေးဆပ်မှုတွေအတွက် မင်းကိုယ်မင်း ဂုဏ်ယူလိုက်စမ်း။ မင်း သားမြေးတွေ ဂုဏ်ယူတတ်အောင် သင်ပေးစမ်း။
ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးကို မင်း ခေါင်းထဲက မောင်းထုတ်ပစ်လိုက်။
ငါတို့ ပေးဆပ်နေတယ်။ ရင်းနှီးနေတယ်။ လာ..ပေးဆပ်ကြစို့။ ရင်းနှီးစို့။
၈၈ ငြိမ်းချမ်းရေး တေးသံ (တေးရေး-ကိုမြအေး) သီချင်းမှ စကားပြောများ ဖြစ်သည်။
“I want Aung San Suu Kyi not only to be released but to be in power in Burma. That’s one of the great causes of the 20th century, every country should beademocracy and Burma is one of these countries that has been prevented from doing so. There isaneed for China, India and the other countries around Burma to bring pressure to bear on the Burmese government to embrace democracy and respect human life,”
Britain’s Prime Minister Gordon Brown said one of his biggest ambitions before leaving politics.
Daw Aung San Suu Kyi expressed,
Key figures in the event of the 8888 Uprising
Key figures for peoples’ demands: U Aung Gyi, U Tin U, U Nu, Daw Aung San Suu Kyi and Min Ko Naing (Left to Right)
Key figures against peoples’ demands : U Ne Win, U Sein Lwin, Dr Maung Maung, Snr. General Saw Maung (Left to Right)
Source: Soro “Voices of 88″
Picture of 8888 Uprising
Source: Nyein Chan Yar blog
Mass rally outside Rangoon General Hospital (1988 Uprising)
Members of the armed forces march in support of democracy (1988 Uprising)
The above-four pics are copied from BURMA SITMONE weblog.
Picture of the 8888 Uprising (sources – unknown)
President Bush poses foraphoto with children as he visits the Mercy Centre of the Human Development Foundation in Bangkok, Thailand Thursday, Aug. 7, 2008. Left of Bush is executive director Usanee Janngeon. (AP)